Kedu ụdị ụdị 5 kacha mkpa ịkpọ oku-ime-ihe? | Martech Zone
Kedu ụdị ụdị 5 kacha mkpa ịkpọ oku na-eme ihe?
Anyị na-enye ndụmọdụ mgbe niile banyere CTAs na-aga n'ihu ebe a n'ihi na ha dị oke mkpa maka ịga nke ọma. Enwere ike ịnwa gị iche na ịchọghị ha - na atụmanya ga-eme njem ọzọ n'ihi na ọdịnaya gị dị mma. Ọ dị m ka ya bụrụ na ọ mere otu ahụ mana, ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ ga-apụ. Ha nwere ike ịhapụ n'ike mmụọ nsọ ma mụta ihe ole na ole… ma ha ka na-ahapụ.
Anyị ekekọrịtala ihe ndị bụ isi nke oku na-aga na post a, Kedu ihe bụ CTA, na CTA bụ ihe zuru oke na nke ọ bụla nkesa weebụ. Mana anyị atụlebeghị ihe ịkpọ oku na-akachasị eme, ihe kpatara ha ji arụ ọrụ, yana omume kachasị mma n'ịmepụta nnukwu CTA… ruo ugbu a jiri ozi a sitere na Breadnbeyond, 5 Kasị Kpọtụrụ Kpọọ Ọrụ.
Ihe Kachasị Kpọọ Kpọọ na Omume:
Na-oku na-ihuenyo na-Action - CTA ọ bụla ị hụrụ na kọmputa ma ọ bụ ekwentị bụ CTA na ihuenyo. Ọ nwere ike ịbụ njikọ, ma ọ bụ ọbụlagodi naanị nọmba ekwentị ịpị.
Single Button - Oku na-eme ihe dị mfe ma kwụ ọtọ na bọtịnụ dị ka etiti nke nlebara anya. Imirikiti oge, ụdị CTA a nwere akara ngosi siri ike nke nwere nnukwu font na obere ederede dị n'okpuru ya.
Freebies Banye - Mpaghara ederede ka itinye adreesị ozi-e gị iji nweta ihe na nloghachi, dị ka akwụkwọ akụkọ, ebook, akwụkwọ akụkọ ọcha, wdg. Ọ bụ nnukwu CTA maka iwulite ndị na-ege ntị na ụfọdụ ahịa ọrịre.
Ọnwụnwa adịchaghị - Maka nyiwe, nke a bụ ihe dị mkpa CTA. Ọ na-enyere atụmanya aka ịdebanye aha ozugbo ma nwalee ngwaahịa na-enweghị agwa onye na-ere ahịa okwu.
Onweghị ehi ehi ** t - CTA maka ụdị ndị olile anya ha chọrọ iso ha rụọ ọrụ. Ọ na-ewe akara obi ike iji tinye nke a, mana ọ nwere ike ịmepụta egwu ahụ nke ịhapụ, FOMO, nke na-eme ka mgbanwe ndị ọzọ gbanwee.
Nke a bụ infographic - wepụta oge iji nwalee nke ọ bụla n'ime ha wee hụ otu ị ga - esi bulite atụmatụ CTA iji mee ka ndị mmadụ gbanwee azụmahịa gị na ntanetị!
Tags: kpọọ ka emekpọọ n’ọrụctabudata ctafree download ctan'efu enye ctafree ikpe ctaenweghị bullshit ctaonscreen ctaadịchaghị enye ctaotu bọtịnụ cta